Indlu eSweet eKaprovani
Indawo iyamangalisa. Izindlu ezintsha, eziqaqambileyo kunye nezona zikhululekileyo kude nolwandle, kunye nembono yolwandle ukusuka kwigumbi lokulala kunye negadi entle. Umgangatho wokuqala ubonelela ngekhitshi lesicwangciso esivulekileyo kunye nendawo yokuhlala equkuqela ngokwendalo ukuya kwithafa elikhulu, apho undwendwe lunokonwabela ikofu yasekuseni okanye luqokelelene etafileni kwisidlo sangokuhlwa emva kosuku oludinisayo lokushiswa kwelanga.
indawo egqibeleleyo, esehlathini nje 150 m kude elunxwemeni, 5 min ukuhamba umgama ukusuka elwandle. Ukuvumela abathengi ukuba baphumle ngoxolo ngomoya omtsha kunye nesithunzi esihle kwiintsuku ezinelanga kakhulu.Unxweme lwethu lugutyungelwe yintlabathi yamagnetic elungele impilo.
Ubumelwane buzolile, bunomthunzi ngomgca wemithi yompayina, enezindlu ezininzi zabucala kunye nehotele enye encinci enendawo yokutyela. Asikho kude neBleck sea Arena.Ukusuka kwelinye icala - ilali yokwenyani, ekunene ngokuchasene neBlack Sea Arena, phambi kweKobuleti, kwaye kwelinye icala, emva kweLali i-Ureki neCarovani. Icala lethu lifana nommandla wezindlu ezisanda kwakhiwa eziselunxwemeni kunye nezindlu eziqeshisayo zeholide ezirentwayo.Kukho ipaki yokonwabisa ''iTsitsinatela'', ikwayipaki yeemvumi kunye nemyuziyam yaseGeorgia encinci / encinci.
Iqela leeApartments ezifanelekileyo liyafumaneka kwiindwendwe 24/7